Pork bamboo shoot curry
၀က်သား မျှစ် ဆီပြန်ဟင်း
မျှစ်ကို ပြုပ်ပီး ငါးပိရည်၊ ငပိထောင်း နှင့် အတူ တို့စရာ အနေနဲ့ စားရင်လည်း အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။
၀က်သားကို အသားတုံး … တုံးပီးတာနဲ့ ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန့်၊ ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့်၊ ပဲငံပြာရည် အကြည် နဲ့ နယ်ပီး ခဏလောက် နှပ်ထားပါ။
ချက်မယ့် ဒယ်အိုးထဲမှာ … ဆီကိုထည့် … ဆီပူပီ ဆိုတာနဲ့ ကြိတ်ထားသော ( ထောင်းထားသော ) ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဂျင်း ထည့် ဆီသတ် … ပီး … နှပ်ထားတဲ့ ၀က်သားထည့်မွှေပါ။
ဆီသတ်ထားတဲ့ ကြက်သွန်နီဖတ်များနှင့် ၀က်သားကို နှံစပ်နေအောင် မွှေပီးမှ ….
အစပ်ကြိုက်တတ်ရင် ငရုတ်သီးစိမ်းတောင့်လေးတွေကို အညှာခြွေပီး ထည့် …..
ရေကို အသားတုံး မြုပ်ရုံလေး ထည့် … ၃ ရေလောက် ဖြင့် ချက်ပီး ….
နောက်ဆုံး ရေ ထည့်ခါနီးမှာ စိတ်ထားသော မျှစ် ၀ိုင်းဝိုင်းလေးတွေထည့် … ပီးမှ ရေထည့်ပေးလိုက်ရင် ….
၀က်သား .. မျှစ် ဆီပြန်ဟင်းနှင့်အတူ ငပိထောင်း စပ်စပ်လေးကို သံပုရာသီးလေး ညစ်ပီး စားရင် လိုက်ဖက်ပါတယ်။
ကိုယ် … ဒီမျှစ်ပြုပ်ကို ကြိုက်တယ်။
ငပိရည် တို့စရာ အနေနဲ့ လည်း ဒီမျှစ်ပြုပ်ကို ကြိုက်သလို ….
၀က်သားကို သကြား၊ ပဲငံပြာရည် အနောက် နဲ့ နယ်ပီး မျှစ် နှင့် မုန်ညင်းချဉ် ထည့်ပီး ပေါင်းတဲ့ ” ၀က်သား မျှစ်ပေါင်းဟင်း ” အနေနဲ့လည်း ကြိုက်တယ်။
ရန်ကုန်က တရုတ်နှစ်သစ်ကူး … မိသားစု ရိုးရာ ရှိခိုးပီး နောက်တနေ့ ရှိခိုးတဲ့ ဟင်းတွေ အားလုံးပေါင်းပီး ဒီလို မျှစ် နှင့် အတူ ( baby corn ) ဘေဘီ ပြောင်းဖူး၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ မုန်လာဥနီ၊ မှို ထည့်ချက်ထားတဲ့ ဟင်းပေါင်းထဲက ဒီလို မျှစ်မျိုးကိုလည်း ကြိုက်တာပဲ။
ကျန်တဲ့ ဟင်းတွေကို မျှစ်၊ မှို၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြင့် ရောမွှေပီး .. ချဉ်ရည်အရသာ ချက်လို့ ရသလို … အချို အရသာ ချက်လို့လည်း ရပါတယ်။
ဒီဟင်းပေါင်းက မျှစ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် များဖြင့် ရောမွှေပီး အသားပါသော ချဉ်ရည်ဟင်း အနေဖြင့် ချက်ထားသော ဟင်းပေါင်း …
အသားများလည်း နူးအိနေသလို .. အသားထဲကို မျှစ် နှင့် အတူ ချဉ်ရည် အရသာ ၀င်နေတာမို့ စားကောင်းပါတယ်။
ငရုတ်သီးစိမ်းများပါ ထည့်ရောချက်ထားသော ဟင်းပေါင်း ( ချဉ်၊ စပ် ) အရသာ
ပုစွန်ငပိကို ထမင်းစားဇွန်း ( ၂ ) ဇွန်းခန့် ငပိဖုတ်ပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ငပိဖုတ်ကို ညက်နေအောင် ထောင်းပါ။
ပီးရင် သံပုရာသီး တခြမ်းစာ ညစ်ထည့် …
ငပိထောင်း နှင့် မျှစ်ပြုပ်
By Thet Nandar • Posted in Cooking Ingredients, Pork - Curry, Pork Recipe, Thiriyatanar's Special	• Tagged Bamboo Shot, colourful recipes blog, dinner, food, Pork Recipe, thiriyatanar